09W « MMWeather Information BLOG
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း RAMMASUN-09W ဟိုင်နန်ကျွန်းနှင့်ဗီယက်နန်မြောက်ပိုင်းသို့ ဦးတည်
By mmweather.ygn, on July 16th, 2014%
GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်ခန့်မှန်း ပုံဖေါ်ချက်များအရ – တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း RAMMASUN(09W)သည် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်း အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး၊ မူလခန့်မှန်းထားသည့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း ဟိုင်နန်ကျွန်းမြောက်ဘက်စွန်းအား ဖြတ်သန်းကာ တုံကင်ပင်လယ်ကွေ့မှတစ်ဆင့် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ကမ်းခြေအား ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် အစောပိုင်းတွင် စတင်ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် ဟိုင်နန်ကျွန်းအား ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခြင်း မပြုမီ အဆင့်-၃ (အားအလွန်ကောင်းသော တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီးမှ ဟိုင်နန်ကျွန်းနှင့် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းကမ်းခြေအားဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် အစောပိုင်းမှ စတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသနှင့် မွန်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် မုတ်သုံလေအား အလွန်ကောင်းလာမည့် အခြေအနေကို တွေ့ရပြီး၊ ဇူလိုင် ၁၉ ရက် ညနေပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နှင့် ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် တစ်ခုလုံး၌ . . . → Read More: တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း RAMMASUN-09W ဟိုင်နန်ကျွန်းနှင့်ဗီယက်နန်မြောက်ပိုင်းသို့ ဦးတည်
Leaveacomment Uncategorized တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း RAMMASUN တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းအား တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်-၃ ဖြင့် ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်ခဲ့သော TYPHOON RAMASSUN(09W) (ဖိလစ်ပိုင်အမည် – GLENDA)သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြို့တော် မနီလာ၏ တောင်ဘက် မိုင် ၆ဝ ခန့်မှ ကပ်၍ ဖြတ်ကျော်ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်(အနောက်ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်)သို့ စတင်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိပါသည်။ မုန်တိုင်းသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသအား ကုန်းမြေပေါ်မှ ၂၆၅ မိုင်ခန့် ဖြတ်သန်းရွေ့လျားခဲ့ပြီး တောင်တရုတ်ပင်လယ်အား ဖြတ်သန်းကာ ဒုတိယမြောက် landfall အဖြစ် ဟိုင်နန်ကျွန်းမြောက်ပိုင်းအား ဇူလိုင် ၁၈ ရက် ညနေပိုင်းတွင်လည်းကောင်း၊ တတိယမြောက်နှင့် နောက်ဆုံး landfall အဖြစ် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဟနွိုင်းမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၉ဝ ခန့်အကွာ တုံကင်ပင်လယ် ကမ်းခြေကို ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် ညနေပိုင်းတွင်လည်းကောင်း . . . → Read More: တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း RAMMASUN တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်
Leaveacomment Uncategorized အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း RAMMASUN – ဟိုင်နန်ကျွန်းအား အဆင့်-၄ ဖြင့် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ခန့်မှန်း
By mmweather.ygn, on July 15th, 2014%
ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက် ညပိုင်း၊ ဟိုင်နန်ကျွန်းမြောက်ပိုင်းအား . . . → Read More: အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း RAMMASUN – ဟိုင်နန်ကျွန်းအား အဆင့်-၄ ဖြင့် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ခန့်မှန်း
Leaveacomment Uncategorized ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းကို ကျော်ဖြတ်၍ တောင်တရုတ်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် မုန်တိုင်း RAMMASUN-09W
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ်မှ မုန်တိုင်းတစ်ခု ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ဦးမည်
By mmweather.ygn, on August 4th, 2013%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ဟိုင်နန်ကျွန်းနှင့် ဗီယက်နန်နိုင်ငံတို့ကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်သည့် မုန်တိုင်း JEBI ၏ အကြွင်းအကျန်တိမ်တိုက်သည် ယနေ့ည ၁၁ နာရီခွဲအချိန် ရရှိသည့် ဂြိုလ်တု animation ပုံ အရ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းတို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။(ပုံ-၁)
ဇူလိုင်လ ၃ဝ ရက်နေ့တွင် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်ပိုင်း၊ ဂူအမ်ကျွန်း၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94W သည် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအား ဖြတ်ကျော်ကာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းသို့ သြဂုတ်လ ၄ ရက် ညနေပိုင်းတွင် SULU ပင်လယ်မှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ လေဖိအားနည်းဆဲလ် တောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိမည့်အချိန်(သြဂုတ်လ ၅ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၅း၃ဝ နာရီမတိုင်မီတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ်မှ မုန်တိုင်းတစ်ခု ထပ်မံဖြစ်ပေါ်ဦးမည်
Leaveacomment Uncategorized ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်း JEBI-09W မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်အနီးအထိ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည်
By mmweather.ygn, on August 3rd, 2013%
ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း(ဟနွိုင်းမြို့မြောက်ဘက် မိုင် ၆ဝ ခန့်မှ ဖြတ်ကျော်၍ ကုန်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် မုန်တိုင်း JEBI(09W) သည် ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ဖြင့် အနောက်မြောက်ဘက်(Heading 296 degrees)သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေပြီး သြဂုတ်လ ၃ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၄း၃ဝ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ်သို့ ဆက်လက်ဝင်ရောက်ကာ ဗဟိုလေတိုက်နှုန်း 35 knots သို့ ကျဆင်းမည်ဟု JTWC warning 14 (Final warning) မှ ရရှိသည့် အချက်အလက်များအား ပုံဖေါ်ချက်တွင် တွေ့ရပါသည်(ပုံ)
ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်း JEBI သည် သြဂုတ်လ ၄ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃ဝ နာရီ တွင် အနီးဆုံး မြန်မာ-တရုတ်(ယူနန်ပြည်နယ်) နယ်စပ်မှ မိုင်၉ဝ ခန့်(မြစ်ကြီးနားမြို့ . . . → Read More: ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်း JEBI-09W မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်အနီးအထိ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည်
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ မုန်တိုင်းJEBI ဟိုင်နန်ကျွန်းအား ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်တော့မည်
By mmweather.ygn, on August 2nd, 2013%
သြဂုတ်လ ၂ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃ဝ နာရီ တွင် နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် မုန်တိုင်း JEBI သည် မူလခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ ဟိုင်နန်ကျွန်း HAIKOU မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁၂ဝ ခန့်အကွာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်းတွင် ဗဟိုပြုနေပါသည်။
မုန်တိုင်း JEBI သည် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး ယနေ့ညနေပိုင်းတွင် ဟိုင်နန်ကျွန်းကမ်းခြေအား စတင်ကျော်ဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဟိုင်နန်ကျွန်းအား ဖြတ်ကျော်ချိန်တွင် မုန်တိုင်း JEBI ၏ အင်အား အကောင်းဆုံး အခြေအနေအဖြစ်သတ်မှတ်ထာပြီး မုန်တိုင်းဗဟို၌ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၆၅ မိုင်မှ မိုင် ၇ဝ နှုန်းခန့်အထိ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းအမြင့် ၂၃ . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ မုန်တိုင်းJEBI ဟိုင်နန်ကျွန်းအား ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်တော့မည်
Leaveacomment Uncategorized မုန်တိုင်း ၂ခုကြားကျရောက်မည့် အခြေအနေကြောင့် မိုးကြီးရေလွှမ်းမှု ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်
One comment Uncategorized တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း VICENTE ဟောင်ကောင်မကာအို အနီးမှ ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်
By mmweather.ygn, on July 23rd, 2012%
အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာသည့် VICENTE သည် မကာအိုမြို့တောင်-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၉၀ ခန့်အကွာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် မုန်တိုင်းမျက်စေ့အား ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်ရသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် ဒေသအတွင်း လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုနှုန်း တစ်နာရီ မိုင် ၈၀ မှ မိုင် ၁၀၀ အထိ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မုန်တိုင်း အရွယ်အစား အချင်း ၈၃၅ ကီလိုမီတာ (၅၁၉ မိုင်ခန့်) ရှိပြီး၊ မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် မုန်တိုင်း ဒီလှိုင်းအမြင့် ၂၁ ပေ အထိရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မုန်တိုင်းသည် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၈ မိုင်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားပြီး မုန်တိုင်း ဗဟိုသည် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆နာရီခွဲမှ . . . → Read More: တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း VICENTE ဟောင်ကောင်မကာအို အနီးမှ ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ မုန်တိုင်း VICENTE လမ်းကြောင်းပြောင်း၍ Guangdong ပြည်နယ် အနောက်ဘက် ကမ်းခြေသို့ ဦးတည်
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် မုန်တိုင်း VICENTE (09W) သည် ရွေ့လျားမှု နှေးကွေးသွားပြီးနောက် လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲကာ အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ပြန်လည် ရွေ့လျားလျှက်ရှိကြောင်း ဇူလိုင် ၂၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ သိရပါသည်။
TSR မှ ခန့်မှန်းချက်အရ မုန်တိုင်းသည် လက်ရှိနေရာမှ အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ပြန်လည် ရွေ့လျားပြီး မူလခန့်မှန်းလမ်းကြောင်း အထက်သို့ ရောက်ရှိကာ တရုတ်ပြည်-Guangdong ပြည်နယ် အနောက်တောင်ဘက် ကမ်းခြေအား Maoming မြို့နှင့် Zhanjiang မြို့များကြားမှ လာမည့် ၃၆ နာရီအတွင်း(ဇူလိုင် ၂၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲ မတိုင်မီ) ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဘွယ်ရှိကြောင်း . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ မုန်တိုင်း VICENTE လမ်းကြောင်းပြောင်း၍ Guangdong ပြည်နယ် အနောက်ဘက် ကမ်းခြေသို့ ဦးတည်